Maamulka Galmudug oo Ku Eedeeyey Dhaawacyada kooxda Ahlusunna in la geeyay deegaanada Puntland sida Garowe! | Dayniile.com
Home Warkii Maamulka Galmudug oo Ku Eedeeyey Dhaawacyada kooxda Ahlusunna in la geeyay deegaanada...
Maamulka Galmudug oo Ku Eedeeyey Dhaawacyada kooxda Ahlusunna in la geeyay deegaanada Puntland sida Garowe!
Wasiiru dowladaha wasaaradda Caafimaadka Dowlad-goboleedka Galmudug Axmed Mire Faafaale, ayaa sheegay in Ururka Ahlusunna ee dhawaan ciidanka dowladda kula dagaamay Guriceel ay dhaawacyadooda gaysteen deegaanadda maamulka Puntland sida Gaalkacyo dhanka Waqooyi iyo magaaladda Caasimadda ah ee Garowe.
Faafaale oo warbaahinta ku hadlay Gaalkacyo ka dib markii uu booqday dhaawacyo ka dhashay dagaalkii Guriceel ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug uu amray in dhamaan dhaawacyada dagaalka ka dhashay si isku mid ah loo daaweeyo iyada oo aan la eegeen arragtida ay aaminsanyihiin.
Waxa uu intaasi ku daray in dadkii u dhaawacmay dagaalka lagu dabiibayo magaalooyinka Galkacyo, Dhuusamareeb iyo Muqdisho wasaaradiisuna ka war hayso xaaladooda Caafimaad balse Ahlusunna ay dhaawacyadeeda gaysatay Puntland sida Gaalkacyo qaybta ay maamusho Puntland iyo magaaladda Garowe ee xarunta maamulkaasi.
“Inta badan dhaawacyada kooxdaasi runtii waxaa la geeyay sida aan ka warhayno Waqooyiga magaaladda Gaalkacyo ee Puntland iyo magaalooyinka kale ee Puntland sida Garoowe, laakiin dhaawacyadii soo gaaray isbitaaladda Galmudug si sax ah oo siman oo cadaalad ah ayaa loogu adeegay lamana takoorin, lama dhibaatayn waana waajib wasaaradda saaran oo uu bixiyay madaxweynaha Galmudug” ayuu yiri Axmed Mire Faafaale wasiiru dowlaha Caafimaadka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug oo Dhuusamareeb ka hadlay 26 October 2021, ayaa sheegay in Ahlusunna ay dagaalka ku garabsiinayaan Soomaali iyo Ajaanib taas oo lagu macneeyay in uu kula jeeday maamulka Puntland ee dariska leh.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug, Cabdiladhiif Muuse Nuur (Sanyare), ayaa dhankiisa beeniyay in maamulka Puntland uu qayb ka yahay dagaalka Guriceel isaga oo sheegay in ay ixtiraamayaan jiritaanka Galmudug maadaama ay yihiin maamul ay darisyihiin.
Dhaawacyada laga bixiyay Istibaalka Gaalkacyo.
Maamulka Galmudug ayaa isbitaal Galkacyo ee xarunta gobolka kala baxay laba sarkaal oo dhaawac ah kuwaas oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Ahlusunna.
Dhaawacooda ayaa hada lagu dabiibayaa magaaladda Muqdisho sida saraakiisha amaanka u sheegeen Mustaqbal Media.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay “ in istibitaalka laga baxay saraakiil aan hubaysnayn”.
Sheekh Shaakir ayaa sheegay in ay haayaan dhaawacyada askar ka mid ah dowladda ay u fidinayaan gargaar Caafimaad.
Previous articleMareykanka oo kordhinaya siyaasadiisa la dagaalanka Al-Shabaab
Next articleFarmaajo oo Qorsheenaya in Uu Xilka Ka Qaado Cumar Filish
Ra’iisul wasaaraha Japan oo ballan qaaday inuu xoojin doono militariga si uu ula tacaalo xaaladda kacsan ee gobolka
Cayaartooyda Degmooyinka Hodan iyo Kaxda oo badiyay tartanka kubadda cagta
Waxgaradka Mareexaan oo ka soo hor jeeda boob ay sheegeen in lagu sameeyey kursigoodii golaha shacabka ee HOP#054
Masaajidyada ku yala Jarmalka oo loo oglaadey in aadaanka salaadda Jimce...
Shan iyo soddon Masaajid oo uu ku jiro masaajidka ugu weyn dalka Jarmalka oo ku yaala magaalada Cologne ayaa loo oglaadey in aadaanka salaadda...
Hormuud Salaam Foundation ee keentay Warshada Dhalisa Ogsijiinta.
” Xildhibannnada waxaan leeyahay, dadka ha khaldina meesha Qayilaad ayaad u...
Wasiir ka tirsan Galmudug oo sheegay in wadahadaladii Farmaajo iyo...
RW Rooble Oo War Kasoo Saaray Jadwalka Doorashada 9kursi Ee Somaliland...
Roob lagu diirsaday ayaa ka da’ay Deegno dhaca Koonfurta Mudug
Guddiga Doorashooyinka Galmudug ayaa maanta shaaciyey 5-ta kursi ee ugu horreysa...